Solofo fanadiovana fika momba ny fanadiovana lavitra sy robotic | Rov
ROV sy robotic tsy lehilahy miditra amin'ny rafitra fanadiovana tank
Fanadiovana tank sy lozisialy tsy fanaratsiana ary rafitra fanarenana solika ihany koa. Ny tsara indrindra sy ny famerenam-bidy mandeha amin'ny Toto sy fanarenana solika tsara indrindra no tsara indrindra eto amin'ny toerana farany sy ny toeran'ny Premier ho an'ny mpanadio Tank rehetra.
Famolavolana rafitra sy fanamboarana solika
"PRO-LINE HYDRALINK manamarina ny fitantanan'izao tontolo izao amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny fanadiovana ny tanky sy ny robote sy ny fanarenana solika"
Injeniera amin'ny hidiran'ny indostrialy sy hidiran'ny tsiranoka
FITAOVANA IZAO DIA MANAO NY FAMPISEHOANA NY FIVORIANA SY FIVORIANA DIA NAMPIANATRA NY FAMPIANARANA TANK MANONY
Ny Indostrianay dia manao fanadiovana ny tanky maoderina-azo antoka sy mahomby ho an'ny mpanadio TANK sy tompon'ny tank
Mpikaroka momba ny teknika hidradrika sy elektrikaikatra
Avia hiresaka aminay momba ny fanadiovana tanky sy ny fanarenana solika ao anatin'izany ny tsy fidiran'ny olona, ​​ny lavitra ary ny robotika. Ilay manam-pahaizana fanta-daza eran'izao tontolo izao, Tony Bennett, dia nanomboka nanadio solika sy vokatra fitaterana vokatra tany Frantsa tamin'ny 1976 ary vetivety dia nanapa-kevitra fa misy fomba tsara kokoa sy azo antoka ary mora kokoa hanaovana an'io asa io. Tony dia nandray anjara tamin'ny famolavolana sy fanamboarana ireo rafitra fanadiovana tanky isan-karazany, ao anatin'izany ny rafitra tsy fidiran'ny olona ary koa ny rafitra fanarenana solika. Ny traikefa lehibe nananany tao amin'ity indostria ity dia manome azy fahalalana hanampiana ny mpanjifa hahatakatra izay tokony ho tratrariny sy ny fomba hanaovana izany araka ny tokony ho izy. Tony dia nanandrana tamin'ny hevitra maro momba ny fanadiovana tanky ary tena nahalala tsara izay mandeha sy izay tsy mandeha. Miantso na mandefasa mailaka amin'i Tony raha hiresaka.
Ny fananganana dia iray amin'ny herintsika
Miaraka amin'ny ekipa injenieran'ny famolavolana matihanina voatokana, injenieran'ny famolavolana tsiranoka, injeniera elektronika, mpitantana QC ary mpiasa manana fahaiza-manao ambony eo amin'ny gorodon'ny fivarotana PRO-LINE HYDRALINK dia orinasa iray miavaka izay nanangana ny lazany amin'ny kalitaon'ny vokatra. Ny fahafahantsika manao injeniera / mamolavola, manamboatra & manangona fitaovana vaovao dia faha-2 hatramin'ny TSY MISY. Miaraka amin'ny famolavolana ny vokatray manokana, manamboatra ny fitaovanay rehetra ao an-trano izahay izay ahafahanay mamorona vokatra mitarika tanjona ary mitazona kalitao avo lenta tokoa.
Ny herin'ny angovo sy ny angovo
Tifitra mifono solika mavesatra any amin'ny tobin'ny famokarana herinaratra, ROV ary Robotic Materiel mifehy amin'ny indostrian'ny nokleary dia ampiasaina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fitaovantsika.
Ny indostrian'ny solika dia iray amin'ireo manampahaizana manokana ataontsika
Ambonin'ireo fiara fitahirizan-tany, fiara fitaterana ambanin'ny tany, fiara fitaterana an-dranomasina sy lavarangana - Ny rafitra misy anay dia hanadio azy ireo amin'ny alàlan'ny safidy Remote sy Robotika mba hiantohana ny fiarovana.
Fanontaniana sy valiny matetika
01 Nampidirina tamin'ny lavaka vaingadin-drano ny tampon-tsolika Tanksweep na tamin'ny alàlan'ny fantson'ny tongotra tafo
Ireo fomba fanaon'i Tanksweep dia tsy tokony hafangaro amin'ireo fomba ireo izay matetika tsy mahomby noho ny antony maromaro 1. Ny kely nozo ary voafetra ny fahafahan'izy ireo mandalo arofan-drivotra mandritra ny tsindry mahafa-po raha ny sizzle Tanksweep 18 santimetatra tsirairay avy dia mandefa ny 660m3 / adiny 10 amin'ny fanerena bar. 2. Ireo nozzles dia mihodina tsy misy farany ary tsy azo fehezina na mitodika any amin'ny toerana ilàna azy ny lalan-dry zareo raha ny zotra Tanksweep ary mitodika amin'ny fomba fantsom-pandeha amin'ny alàlan'ny kodiarana tanana tsotra mankany amin'ny toerana ilana azy ireo. 3. Nozzles napetaka amin'ny tafo tank no tsy milentika ary noho izany dia mila porofona ny tanky, fa ny Tanksweeps dia ampiasaina rehefa 1.5m ny haavon'ny rano ao anaty tanke, izany dia miantoka fa ny fako avy amin'ny nozzle dia tsy afaka mamakivaky ny ranon-tsavony ho any amin'ny habakabaka ary noho izany dia tsy ilaina ny miditra anaty tank. Mazava ho azy raha ny lalàna eo an-toerana dia mitaky ny rano madio fotsiny raha tsy alefa avy eo dia azo atao ihany koa. 4. Ny zoro vita amin'ny tafo tank dia afaka manelingelina ny fikororohana ao anaty elanelan'ny zotom-pandrindrana ary somary eo an-toerana hatrany amin'ny toerana misy ny nozzles, izany dia midika fa afaka manarona ny tank manontolo nozzles mila amiana fa Mazava ho azy fa tsy azo fehezina ny alehany raha toa ka Tanksweeps milina hatramin'ny antsasak'adiny 50m dia azo diovina miaraka amina tanksweeps 2 x, ny tanky iray eo anelanelan'ny 50 sy 80m dia mitaky tankina 3 x, ary tankina misy 80-100m dia mitaky 4 tanksweeps. 5. Ny fivoahana eo amin'ny tafo dia mitaky ny cranage ary ny lehilahy ao amin'ny tafo ny tank ary ny Tanksweeps dia miditra amin'ny sisiny ny tankina ka tsy mila manaparitaka nozzles ary manopy ny tranon'ny tankina na handefa lehilahy hiasa amin'ity faritra tena mampidi-doza ity. 6. Noho ny orona Tanksweep dia miolikolika ny lafiny rehetra dia rakotra ny tankina manontolo ary amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mandrafitra mafana dia mitodika any amin'ny toerana ilain'izy ireo ny tsimoka tanksweep. Mba hamonoana sy hamonoana ny votoatin'ny tanky rehetra dia manana hery hanatanterahana ilay asa ny Tanksweeps.
02 Raha mihoatra ny làlan-kaleha ny haavony ao anaty fitoeran-drano, ahoana ny fampidiran'ny Tanksweeps
Ny Tanksweeps dia mandeha amin'ny alàlan'ny fidirana amina sisin-dàlana amin'ny alàlan'ny làlan-kaleha mampiasa 3 tanksweeps (amin'ny zoro diametatra 80m) Noho ny haavon'ny haavo tsy azo esorina. Noho izany ny fidirana amin'ny tanky ao anaty tanky dia amin'ny alàlan'ny fampiasana flanges Proline Hydralink Coldtap. Ny flanges mangatsiaka dia apetaka amin'ny rindrina manway amin'ny alàlan'ny fanadiovana voalohany ny lakan'ny loko sy ny harafesina mba hahazoana antoka fa ny tobin-tsolika dia hanao tombo-kase tsara miaraka amin'ireo tavy mangatsiaka. Dia esorina ny voaroy sy bolt hafa azo antoka. Ny flange mangatsiaka miaraka amin'ny lasantsy mety tsara avy eo dia apetaka amin'ny sarony manway ary azo antoka. Ankehitriny dia nesorina ireo tsaramaso sy bolts sisa tavela ary nosoloina ireo voatabia voatokana manokana sy baran-drano izay natolotra miaraka amin'ireo flanges mangatsiaka ary azo antoka. Ny flange mangatsiaka dia misy tadiny misy flange 18 santimetatra mety hasiana azy. Vavahadin'ny vavahady FARANY 18 santimetatra amboarina ary azo antoka ao anaty flange miaraka amina lasantsy. Miangavy milina hidiran'ny hydraulic mafana ankehitriny, ity dia mety ho mpivarotra any ivelany izay manokana amin'ny hottaping na mampiasa ny milina Prolin Hydralink. Ny masinina fitotoana dia aforitra amin'ny valva 18 santimetatra ary nosokafana ilay fantsona ahafahan'ny masinina mandefitra hampihenana ny tapakila mety amin'ny habe amin'ny manway. Raha vao tapahina ny drill dia esorina miaraka amin'ny coupon tapaka ary mikatona ny valy 18. Ny milina fitotoana dia nesorina ary nosoloana ny tanksweep niaraka tamin'ny kaontiny tamin'ny toerana niditra. Tanksweep no tohanana sy zoro amin'ny alàlan'ny 4 jacks. . Ny tanksweeps dia ampifandrafaran'ny tolo-by fantsona nomena ny sivana eo amin'ny sisin'ny fantsom-baravarana tanksweep. Misy ny flange amin'ny andaniny roa ka ny mora azo ampiasaina ary ny iray tsy voatana. Ny sivana dia mifandray amin'ny fantsom-paompa sy ny famoahana paompy mifamatotra amin'ny sisin'ny tanksweep.
Antsoy izahay na fenoy ny taratasy ho an'ny fanontaniana rehetra
UK (+44) 7951930633 na Etazonia (+1) 346-247-8679 ou France (+33) 975170121 ou Bresil (+55) 2135133615
Ny ora fiasantsika:
Ny PRO-LINE HYDRALINK dia hanome anao ny fitaovana tsara indrindra izay mahomby amin'ny fanantenanao amin'ny fotoana sy ny teti-bola
Raha mila vahaolana indostrialy manokana ianao dia afaka anao izahay